Songs ku saabsan Qoyska - Talooyin Songs for Family Reunion
> Resource > Music > Songs Talooyinka Family Reunion
No midaynta qoyska noqon lahaa dhamaystiran oo aan music oo u hadla si qalbigiisa ku saabsan qoyska, kibirka iyo wadajir. Music awood u leeyahay si ay u dejiyaan xaaladda kulmintii kasta, oo ay ku jiraan reeraha, aroosyada, reeraha fasalka, ama wax kasta oo ay dhacdo in aad soo socda ka qayb. Si loo caawiyo laado aad dhacdo socda uruursanayey ah, waxaana sameeyay liiska Siiyay Goolhaye Iker Casillas for our songs midaynta qoyska. Dhegayso heeso iyo dareemaan niyadda. Waxa kale oo aad u isticmaali kartaa si wada slideshow la sawiro, iyo videos for arooska, dhalashadiisa, ama hawlaha midaynta qoyska .
Qeybta 1: Liiska weyn ee songs qoyskaaga slideshow samaynta
Qeybta 2: Download oo dhan music kor ku xusan oo lacag la'aan ah oo la TunesGo
Qeybta 3: Halka laga helo heesaha qoyska ah oo ku saabsan web
Qeybta 4: Sida loo download songs qoyskaaga slideshow samaynta
Qeybta 5: Sida loo sameeyo duubey la songs qoyska bixi
Qeybta 1: Liiska weyn ee songs qoyska u sameynta slideshow
Halkan waxaa ku qoran liiska weyn ee songs qoyska in aad ku raaxaysan karaan. Dhammaan songs qoyska waxyaalahan waxaa loo xulay si taxadar leh waxaad ka heli doontaa waxa aad u baahan tahay.
1. Waxaan nahay qoyska - Sister gaadhi
Diskoo, naf, R & B
Sister gaadhi waa koox Maraykan ah oo ka socoda Philadelphia, Pennsylvania. Waxa asaasay 1971, kooxda ayaa asal ahaan ka kooban Walaalo ah Debbie, Joni, Kathy iyo Kim gaadhi. Iyadoo Kathy tagay ee 1989 kooxda ayaa tan iyo markii uu ku shaqeeya sida seddexda.
2. Kuwa maalmo The - Mary Hopkin
Mary Hopkin, tixgalinayo on qaar ka mid ah cajalado sida Mary Visconti, waa gabayaa ahaa Welsh dad wanaagsan ee loo yaqaan for iyada 1968 tirada UK hal hal "Kuwa maalmo The". Waxay ahayd mid ka mid ah fanaaniinta ugu horeysay inay la soo wareegto si The Beatles 'calaamad Apple.
3. macneheedu jidka adduunka - Nejee
Nejee waa muusikiiste ah oo si weyn loo yaqaan for heestii Waana habka kaliya ee dunida.
4. Bar Carruurtaada - Crosby aamusiiyaa Nash
Country dhagaxayga weyn, Oo dhagax weyn Qoom
Crosby, aamusiiyaa & Nash waa supergroup ah dhagaxa weyn dad ka kooban David Crosby, Stephen aamusiiyaa iyo Graham Nash. Waxaa loo yaqaan Crosby, aamusiiyaa, Nash & Young markii biiray xubin afaraad marmar Neil Young.
5. Xagaaga Wax - waslad Nabiga
Nebiga waslad waa muusikiiste ah oo si weyn loo yaqaan oo uu track xagaaga.
6. Xagaaga - DJ Jazzy Jeff
G-Funk, id lulaan Jack cusub, hip hop, R & B
Jeffrey Allen Townes, sidoo kale loo yaqaan DJ Jazzy Jeff ama si fudud Jazz, waa hip hop American iyo R & B jockey disc, record soo saare, turntablist iyo actor oo ugu wanaagsan ee lagu yaqaan inuu xirfadiisa ciyaareed hore la Will Smith sida DJ Jazzy Jeff & Prince Fresh The.
7. A Song Wixii Mama - Boyz 2 Ragga
Boyz II Ragga waa koox vocal Maraykan R & B, sida ugu fiican u yaqaan for ballads dareenka iyo laxan cappella ah.
8. Fiiri maxay Love Sameyn Karto - Eric Clapton
Rock, Oo dhagax weyn pop, dhagaxyada adag
Eric Patrick Clapton, CBE, waa dhagax weyn oo blues guitarist Ingiriisi, heesaa iyo Xisbi. Isagu waa inductee saddex jeer oo keliya in Rock iyo Roll Hall of Fame: mar sida artist Solo iyo si gooni gooni ah sida xubin ka mid ah Yardbirds iyo Cream.
9. hooyaday Indhaha - Bette Midler
Bette Midler, sidoo kale loo yaqaan iyada stage magaca rasmiga ahayn Ilaah oo u timid Miss M, waa heesaa, Xisbi, Jilaa, oo ahaa majaajiliiste, iyo soo saare filim American.
10. My magaaladiisa - Bruce Springsteen
Bruce Frederick Joseph Springsteen waa Maraykan ah muusikiiste, oo gabayaa ahaa, Xisbi iyo bani'aadamnimada. Waxa uu si fiican loogu soo kacay shuqulkii uu kula E Street Band.
11. Love iyo Happines - Al Green
Albert "Al" Greene, inta badan loo yaqaan Al Reverend The Green, waa heesaa Maraykan wanaagsan ee loo yaqaan lagu qoro taxane ah oo naf hit kali sanadkii 1970.
12. Waxaan guriga soo socda - Lionel Richie
Lionel Brockman Richie, Jr. waa heesaa, Xisbi, muusikiiste, record soo saare American iyo actor. Laga bilaabo 1968, waxa uu ahaa xubin ka mid ah kooxda muusikada Commodores saxiixay dhisan Records.
13. Søren Pind maxay Tagitaanka - Simon & Garfunkel
Simon & Garfunkel ahaa labada ciyaaryahan ah dhagaxa weyn dad Maraykan ah oo ka kooban Fanaanada-Xisbi Paul Simon iyo fanaanada Art Garfunkel.
14. Family Reunion - The O'Jays Original
The O'Jays Original
Philadelphia naf, R & B
O'Jays waa R & B koox Maraykan ah oo ka Canton, Ohio, la sameeyey 1958 oo asal ahaan ka kooban Eddie Levert, Walter Williams, William Powell, Bobby Massey iyo Bill jasaa'irka
Dolly Parton - 15. Qoyska
Dolly Parton Rebecca waa American ah oo gabayaa ahaa-Xisbi, Jilaa, qoraaga, ganacsatada, iyo kuwa bani'aadamnimada, oo loo yaqaan horayn u shaqada ku music dalka.
Qeybta 3: Halka laga helo heesaha qoyska internetka
Inkasta oo aynu ku qoran dhowr heeso qoyska kor ku xusan, qaar idinka mid ah waxaa laga yaabaa doonaya inuu helo dheeraad ah. Dhab ahaantii, waxaa jira khayraad badan oo aad samayn kartaa oo ah inta badan, sida goobaha music iyo goobaha music video. Halkan waxaan ku qor doonaa qaar ka mid ah goobaha music iyo music video ugu caansan si aad tixraac.
Pandora waa radio internet ugu weyn ee internetka halkaas oo aad u badan oo heeso kala duwan ka heli kartaa
YouTube, sida ugu weyn video goobta iyo video search engine, ayaa channel music halkaas oo aad ka heli karto content weyn.
Spotify waa adeeg music ah in aad siinaysaa in ay helaan malaayiin heeso iyo in la heli karo dalal badan MTV waxay bixisaa a collection of videos music iyo sidoo kale macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan music aad ka heli karto.
Grooveshark waa adeeg lacag la'aan ah music oo awood aad si aad u ogaato songs aan xad lahayn si online qulquli. VEVO waa uruuray cayn kasta oo muusiko ah videos xuquuqdiisa in aad ka heli karto si online qulquli.
Lugood Radio waa adeeg cusub oo radio internet oo aad dhegaysan kartaa malaayiin heeso iyo in la abuuro playlists. Yahoo Music waa waxa aad isticmaali karto sidii engine raadinta ah in ay si fudud u heli tan oo videos music si ay u daawadaan.
Songza idinka playlists hoos xaaladda kala duwan, sida ka shaqeeya, nasto, xafladeyn iyo ka badan. Vimeo, sida goobta video ah content kala duwan ah, sidoo kale waxa uu leeyahay qayb ka mid ah videos music in aad ka dooran karto.
Qeybta 4: Sida loo download songs qoyska u sameynta slideshow
Maadaama aad ka heli kartaa heeso qoyska oo laga helay ilo kala duwan, sida goobaha music iyo goobaha music video, waanu kuu sheegi doonaa sida loo soo dejisan labada ilo kala duwan siday u kala horreeyaan.
Barnaamijka aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo songs qoyska ka music goobaha-Wondershare Streaming Audio Recorder
1. Si toos ah kala soo bixi music online 1: 1 tayo wanaagsan
2. caqligiisu aqoonsan song info, sida farshaxanka album iyo wax ka badan
Sida loo isticmaalo Wondershare SAR si download songs qoyska ka goobood music
Download barnaamijkan ka link ee kor ku xusan. Dooro version saxda ah ee computer iyo aad u hesho waxa ay ku rakiban yihiin. Marka aad furto barnaamijka dib markii la rakibey, waxaad ka heli doontaa suuqa kala nadiif ah sida ku cad xaq.
Raadi button Record ah ee bidixda xagga kore ee barnaamijka oo guji si aad u hesho diyaar. Markaas tago in goobaha music halka aad ka heli songs qoyska ugu weyn ee uu u ciyaaro music ah. Sida ugu dhakhsaha badan uu jiro music ka your computer, barnaamijkan bilaabi doonaan in ay soo bixi si aad u computer.
Music waxaa loo diiwaangelin doonaa in MP3 files. Haddii aad u baahan tahay in ay u diraan iDevices aad, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay suuqa kala iibsiga ugu horeeyay ee Lugood. Dooro music iyo riix Add Lugood in badhanka hoose. Markaas waxaad ka heli doontaa files music ee Lugood iyo nidaamka si aad iPhone, iPad ama iPod.
Barnaamijka aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo songs qoyska ka music video goobaha-Wondershare AllMyTube
1. Download ka badan goobaha video sida YouTube, Dailymotion, vimeo iyo wax ka badan videos.
3. U beddelaan videos in qaabab kale oo badan oo ay ka mid yihiin AVI, MOV
Sida loo isticmaalo Wondershare AllMyTube in download songs qoyska ka goobaha video
Dooro version saxda ah iyo dajiyo barnaamij si your computer. Waxaa Launch dib markii la rakibey. Waxaan doonaa qaadan version Windows sida tusaale.
Tag meelaha video si aad u hesho songs qoyska. Qaado YouTube sida tusaale. Marka aad la ciyaareyso video music ah, waxaad ka heli doontaa ah Download button sabayn on top ka right.Click badhanka si aad u hesho video ka soo bixi. Waxa kale oo aad nuqul ka kartaa url ee video iyo riix URL paste badhanka si aad u hesho video ah soo bixi si la mid ah.
Tag ay ku dhameysatay kaalinta maktabadda si aad u hesho ka soo bixi videos. Guji ka badalo button on MP3 saxda ah iyo dooro sida qaab wax soo saarka. Riix Ok inuu ku soo bilowdo qaab beddelidda.
Qeybta 5: Sida loo sameeyo slideshow la songs qoyska bixi
Waxaa laga yaabaa inaad ka qaaday sawiro badan oo isu-keenis qoys, ka dibna aad u soo duubey wada dhigi kartaa gabayo qoyska. Waa kuwan sida.
1. Ku dar sida ugu badan photoes iyo heeso si ay u sameeyaan slideshow
2. Habee slideshow la 480+ Hababka movie
3. aad loo sahlo in ay wadaagaan soo duubey ee ku saabsan Facebook, Twitter iyo in ka badan
Sida loo isticmaalo Wondershare DSB si ay u soo duubey gabayo qoyska
Riix dar Faylal ay kasoo dajiyaan sawiro ama videos ku saabsan midaynta qoyska ama dadka kale aad.
Tallaabada 2. Ku dar songs qoyska si slideshow photo
Tag ka shakhsiyeeyo tab iyo riix Music toolbar ku darto music asalka ama aad si toos ah u soo jiidi kartaa heeso qoyska si ay ula socdaan asalka. Oo weliba waxa kale oo aad ku dari kartaa Hababka kale ee filimka in slideshow ah.
Tag naadiya tab si aad u hesho slideshow la daabacay. Sida ku cad sawirka dhinaca midig, waxaa jira dhawr fursadood oo aad dooran kartaa sida Guba si DVD ama Save si Computer .
4.Manage Lugood Library ;